सूचना Archives - Nepali News Portal
२४ कार्तिक २०७५, शनिबार १४:५७ November 13, 2018 Ajako Samacharचर्चित / सूचनाNo Comment on अशोक दर्जी आफ्नो घर झापा जान नपाय पनि ए आरको साथमा तिहार यसरी मनाय !
तिहारको माहोल लगभग सकि सकेको छ । हिजो भाइ टीका लगाए पछि तिहारको समपान भएको बुझिन्छ। त्यसै क्रममा सेलिब्रेटी…
२४ कार्तिक २०७५, शनिबार ०१:३८ November 10, 2018 Ajako SamacharसूचनाNo Comment on कुन कुन देश सङ भयो त ,१ सय १० देशमा श्रम स्वीकृति, ८ देशसँग मात्रै सम्झौत! थप
जानकारीको लागी पुरा पढ्नुहोश ! सरकारले कानुनी रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको हकमा संस्थागत १ सय १० देश खुला…
२३ कार्तिक २०७५, शुक्रबार १३:०१ November 9, 2018 Ajako SamacharसूचनाNo Comment on साबधान ! कतै हजुरहरु पनि यसरी नै ठगिनु भयको त छैन ! टन्क बुढाथोको फेक आइडी बनायर , ठगि
टंक बुढाथोकिको नाममा फेसबुक आईडी बनाएर रिचार्ज कार्ड र पैसा माग्ने गिरोह अहिले सक्रिय भएको कुरा टंक बुढाथोकीले जनाएका…
विभागले लाइसेन्स छाप्दा लेजर इन्ग्रेभिङ (डढाएर अक्षर उठाउने) प्रविधि प्रयोग गरेको थियो भने मालिकाले थर्मल प्रिन्ट प्रविधिमार्फत छाप्ने…
युवापुस्ताको रोजाइ , बजाज पल्सरको१६० टीडी नेपाली बजारमा, बिक्री सुरु !
१९ कार्तिक २०७५, सोमबार १२:४४ November 5, 2018 Ajako SamacharसूचनाNo Comment on युवापुस्ताको रोजाइ , बजाज पल्सरको१६० टीडी नेपाली बजारमा, बिक्री सुरु !
बजाज कम्पनीले अल न्यू बजाज पल्सर एनएस १६० ट्विन डिस्कलाई नेपाली बजारमा बिक्री वितरण सुरु गरेको छ । यसमा…
के हजुरहरु सङ नि यस्तै पुरानो पैसाहरु छ्न , तर कहाँ र कसरि बेच्ने हो थाहा छैन भने पुरा पढ्नु होस ! कसरि बेच्ने : पुरानो नोटको मुल्य अहिले १० लाख भन्दा पनि बडी मुल्यमा बिक्री हुन्छ ! हामिलाइ बेच्नुहोस ! हामी किन्छौ !
१२ कार्तिक २०७५, सोमबार १६:५१ October 29, 2018 Ajako SamacharसूचनाNo Comment on के हजुरहरु सङ नि यस्तै पुरानो पैसाहरु छ्न , तर कहाँ र कसरि बेच्ने हो थाहा छैन भने पुरा पढ्नु होस ! कसरि बेच्ने : पुरानो नोटको मुल्य अहिले १० लाख भन्दा पनि बडी मुल्यमा बिक्री हुन्छ ! हामिलाइ बेच्नुहोस ! हामी किन्छौ !
जमाना यति छिटो परिवर्तन भयो कि मान्छे हरुले जे पनि अनलाइनमै काम गर्न लागे । अनलाइन बाट श्रीमती…
अब स्मार्ट लाइसेन्स लिनको लागी लामो समय कुर्नु नपर्ने , कारण यस्तो छ !
११ कार्तिक २०७५, आईतवार १६:२१ October 29, 2018 Ajako SamacharसूचनाNo Comment on अब स्मार्ट लाइसेन्स लिनको लागी लामो समय कुर्नु नपर्ने , कारण यस्तो छ !
अधिकांश लाइसेन्स प्रिन्टर बिग्रिएपछि विभागले आउट सोर्समार्फत उक्त परिणामको लाइसेन्स प्रिन्ट गर्ने भएको हो। आजदेखि दैनिक २०…